स्वच्छ छैन पशुपति वृद्धाश्रमको वातावरण
स्वच्छ वातावरण र खानेपानी मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो तर, वृद्धाश्रमको वातावरण र खानेपानी स्वस्थकर छैन । यस वृद्धाश्रमको प्रवेशद्वारमै पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय रहेको छ ।
यहाँ खानाका लागि दैनिक करीब रु ३३ हजार खर्च लाग्छ । त्यसको व्यवस्थापन दाताले गर्ने गरेका छन् । खानाका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रु. एक करोड विनियोजन गरे पनि उक्त रकम फ्रिज हुने गरेको छ । दाताले दिएको बजेटले खानाको व्यवस्थापन हुने गरेको वृद्धाश्रमका कार्यालय सचिव मनोज बस्नेतले जानकारी दिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले आश्रमको प्रवेश द्वारमा रहेको सर्वाजनिक शौचालय एक हप्ताभित्र सफा गरी बन्द गर्ने र आधुनिक शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले पशुपति क्षेत्रमा रहेको वृद्धाश्रमसँगै रहेको सार्वजनिक शौचालय तथा खानेपानीको समस्या एक हप्ताभित्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार यहाँ वृद्धमैत्री खुला ठाउँ र भवन निर्माण गरिनुपर्छ ।